”Oromo Dialogue Forum”, Shira ABO dadhabsiisuuf gangalchamu! – Kichuu
HomeAfaan OromooNews”Oromo Dialogue Forum”, Shira ABO dadhabsiisuuf gangalchamu!
”Oromo Dialogue Forum”, Shira ABO dadhabsiisuuf gangalchamu!
”Oromo Dialogue Forum”, Shira ABO dadhabsiisuuf gangalchamu
Bara ” 2008 miseensi Shanee Gumii tokkoo fi miseensotni Gumii sabaa hagi tokko jijjiirama ofiin jedhanii of labsuun ni yaadatama. Yeroo sana Dr. Diimaa Noogoo gorsituu qaama jijjiirama san ta’ee ifatti labsame. Obbo Leencoo Lataas gartuu san waliin jira jedhamee hamatame.
Obbo Leencoo garuu mediatti bahee ani waan san kessa hinjiru, gartuu kam waliinuu hinjiru. Ani yoon danda’e jaarsummaadhaan rakkoon akka hiikamun tattaafadha jedhe.
Akkuma jedhametti jaarsummaan obbo Leencoo fi Dr. Diimallee dabalate jalqabamee deddeemaa ture. Miseensotni dhaabaa fi deggertootnis dhuguma araarri kun yoo bu’e gaariidha jechuudhaan guddoo abdatame. Dubbiin araaraa sunis asumaa fi achi osoo dhodhommoquu dhuma irratti tasuma waliif galuun dadhabamee faca’e.
Dubbiin jaarsummaa fashalee osoo guddoo hinturin Waltajjii Marii Oromoo/” Oromo Dialogue Forum” kan jedhamu warruma jaarsolii araraa turan obbo Leencoo fi Dr. Diimaa Noogoon jalqabame.
Waltajjiin marii Oromoo jaarrolee araaraa obbo Leencoo fi Dr. Diimaan jalqabame kun kan hirmaachise warruma 2008tti jijjiirama jedhanii ABO irraa bahanii fi miseensota dhaabaa tokko tokko dhaabicha irratti dallansuu qabaachaa turan ture. Waltajjiin marii Oromoo jaarrolee araaraa kun Bitootessa 2013 dhaaba haarayaa masaanuu ABO ta’e, ODF/Adda Dimokraatawaa Oromoo kan jedhamu labse.
Jaarroleen kun ABO irraa bahuu isaaniif nama biraa komatu. Garuu dhaaba haarayaa ODF jedhamu kanas karumatti facaasanii dhiisanii guutuu guutuutti ummatni Oromoo Abiy Ahmed fi jaarmiyaa isaa deggeruu qaba jedhanii bulanii ka’anii media mootummaa irraa lallabaa jiru.
Akkasis ta’ee qabsoo bilisummaa Oromoo gaadi’uu fi fira fakkaatanii ummata Oromootti dhihaatanii ABO fi mooraa qabsoo Oromoo laaffisuu irraa dhaabbachuu didanii ittuma fufanii jiru.
Ergama Abiy Ahmed fi PP bakkaan ga’uuf ABO dadhabsiisuu hojii isaanii godhatanii itti fufanii jiru. Ammas kunoo humna mootummaa Abiy Ahmedtti dhimma bahuudhaan ummata Oromoo bakka adda addatti keessa deemanii sossodaachisuun “Oromo Dialogue Forum” qopheessinee jirraa kottaa irratti qooda fudhadhaa jedhanii dirqiin walgahii waamaa jiru.
Ummatni Oromoo wal marihatee mootummaa Abiy Ahmed mootummaa Oromoo waan ta’eef tumsuu qaba jedhanii ummata dirqisiisuudhaaf dirqama Abiy Ahmed itti kenne waliin dhama’aa jiru waan ta’eef ummatni Oromoo bakka jirutti daba jarri ittiin deemu kana hubatee jalaa diduu qaba.
Akeeki “Oromo Dialogue Forum” isanii kun inni guddaan ammoo namoota sababa adda addaan ABO ganani bahan hunda walit qabanii akkuma Kanaan dura “Oromo Dialogue Forum” irraa ODFn ijaaranii turan amma ammo “ABO” haaromsinee jirra jedhanii labsachuuf ta’uun bira gahamee jira. Kunis shira PP waliin ABO dadhabsiisuuf hojjatamaa jru ta’uun guutuu guutuutti kan mirkanaa’ee fi walga’ii jalqabaa kunoo Bitootessa 13 -14tti Adamaatt waamaa jiraachuun isaanii qabatamaa dha.
Nam- tokkees ta’u gartuun Abiy Ahmed fi PPtti hidhattee sosso’u hundumtuu diina ummata Oromooti.
Shirra adda addaa xaxuun ABO miidhuun ni danda’ama. Amma duras jaarmiyaa keessattis ala irraa qaamota adda addaa fi mootummoota Itiyoophiyaa dhufanii dabran hundaan shira hedduutu xaxame. ABOn garuu jabina ummata Oromoon dandammatee hojii qabsoo ummatni Oromoo bilisummaa isaaf gochaa jiru itti fufee jira.
ABOn kallacha QBO ti.
ABOn tokkichuma, ABOn lama hinjiru.
Ergamtootni Abiy Ahmed fi PP ABO miti
Ethiopian soldiers openly massacring Tigrayans in Tigray. TigrayGenocide – https://t.co/oD1tfeVTem pic.twitter.com/yipqSrOcDf
Beenjamiin Netanaayuu “ግዜዉ አሁን ነዉ?” Kan maaliiti?